Waraana Wayyaanee(TPLF) irratti baname irratti Paartin Badhaadhinaa Oromiyaa waldura dhaabbatan – Awash Times
Waraana Wayyaanee(TPLF) irratti baname irratti Paartin Badhaadhinaa Oromiyaa waldura dhaabbatan
November 13, 2020 Malka Wabe Uncategorized Leave a comment
Odeeffannoo keessaa bahaa jiru akka addeessutti yeroo ammaa kana Paartin Badhaadhinaa Oromiyaa (ODP) jidduutti waldura dhaabbannaa dhalatee jira.
Kunis Foolisii Oromiyaa torbee darbe karaa Affaarif karaa N. Amaaratiin Wayyaanedhaan loluudhaf ergaman kumaatamaan lakkaahama akkuma gahaniin ajjeefamanii yeroo reeffi gara Oromiyaa dhufaa jiru kanatti walmormiin duraanuu hinerginaa fi hinerginuu jidduu ture hammaatee jira.
Badhaadhinni N. Oromiyaa Waraana Wayyaanee irratti baname kana garee tokko sirriitti kan mormaniif keessattuu foolisiin Oromiyaa duuluu hinqaban jedhanii dura dhaabachaa turan. Gareen kuni aangawoota Oromiyaa olaanoo kan of keessaa qabu ta’us ajaja Abiya Ahmed suduudan kenneen foolisiin Oromiyaa humni addaa gara adda waraanaa jalqaba 10 000 ergamuun niyaadatama.
Foolisiin Oromiyaa kunniin muuxannoo waraanaa kan hinqabne waan ta’eef akkuma gahaniin Wayyaanen akka baalaa harcaafte jedhu keessa beektonni. Yeroo ammaa kana mormii sodaarraa kan ka’e foolisoota dhuman kana hunda reeffa gara biyyaa erguurraa of qusachaa jiru. Paartii Badhaadhinaa Oromiyaa (ODP) keessaa warra akka ijoollen gara waraanaa ergamtu dhiibbaa gochaa ture kokkee qabaa jiru.
Walgayii guyyaa lamaan darbe kana godhamerratti hamma harkaan walitti deemuu gahuu isaanii oduun keessan nu dhaqqabe addeessee jira. Badhaadhinni Oromiyaa bakka lamatti bahuun akka hinhafnes eegama.
Warra mormaniif warra deeggaran ammaaf maqaa dhahuurraa kan of qusate odeessan keessoo kuni yeroo gabaabaa keessatti Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti akka jijjiirraa angawootaa gaggeessu eegama. Namoonni hammi tokko hidhamuullee malu oduun jedhu keessaa dhufaa jira.
Previous Post: Ethiopia asked France to acquire Rafale, nuclear missiles
Next Post: The rocket attack on Bahir Dar and Asmara